पच्चीस लाख रुपैयाँ लगानीबाट कस्ता–कस्ता काम गर्न सकिन्छ ? – Khula kura
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा केही लोकप्रियता कमाउने खालका विषय पनि समेटेको छ । त्यसमध्ये एउटा हो स्नातक उत्तीर्ण युवाका लागि प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने विषय ।
देशमा शैक्षिक बेरोजगारी दर बढिरहेका बेला युवा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यका लागि भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कुरा एकदमै सकारात्मक सराहनीय र स्वागतयोग्य छ ।
सरकारले अघिल्ला वर्षमा पनि यसबारे घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन् । सरकारले ल्याएको यो नीति लागू हुन सक्यो र नागरिकहरू पनि अनुशासित, मिहिनेती,लगनशील अनि धैर्यवान् हुने हो भने आगामी केही वर्षमा देशमा बेरोजगारीको सङ्ख्यामा कम गर्न यस्तो नीति लाभदायक हुनसक्छ ।
युवा उद्यमीको सङ्ख्या ज्यादा र विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता कम हुने निश्चित छ । कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता पाउने हो भने उच्च शिक्षा हासिल गरेका समग्र युवाहरूले कुनै कार्यालयमा काम गर्ने,घुम्ने कुर्सीमै बसेर जागिर खाने भन्ने मानसिकता पनि हटाउन जरुरी छ ।
हाम्रो देशमा यति धेरै अवसर छन्,यसलाई सही सदुपयोग गर्न अझैसम्म पनि युवाहरूको दिमागमा छिरेको छैन । स्वरोजगार हुन कतिपय कामका क्षेत्रमा एकदमै कम लगानीबाट सुरु गरेर पनि करोडसम्म पनि पुर्याउन सकिन्छ । त्यस्ता कामका लागि मिहिनेत अनि समय दिई विचलित निरन्तरता दियो भने प्रगति गर्न धेरै समय लाग्दैन ।
यदि सरकारले बजेटमा घोषणा गरेजस्तै बिना झन्झट शैक्षिक बेरोजगारहरू युवा वर्गलाई सहुलियत ऋण दिने हो भने नेपालमा त्यो रकमले धेरै कार्य गर्न सकिन्छ ।
यता बैङ्कहरूले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सीधै ऋण लगानी गर्ने कुरा आउँदैन । उनीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथमा ऋण लगानी गर्ने र त्यो कामबाट ऋण र ब्याज फिर्ता आउने सुनिश्चितता खोजेको हुन्छ । २५ लाख लगानी गरेर स्वरोजगार बन्नका लागि मैले निम्न केही बुँदा सुझाएको छु ।
–२५ लाख रुपियाँमा इम्ब्रोडरी गर्ने,प्रिन्ट गर्ने मेसिन सञ्चालन गरेर हरेक महिना खर्च कटाएर १ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म सजिलै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
–त्यस्तै एलईडी बल्ब बनाउने,पनिर उद्योग,मसला उद्योग,प्याकिङ,बलपेन मेसिन,डलहरू बनाउने,क्याफे,ट्राभल एजेन्सी,वेभ ग्राफिक डिजाइन,विभिन्न तालिम केन्द्रहरू,ट्युसन सेन्टर,होमस्टे लगायतका धेरैभन्दा धेरै प्रकारका व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ ।
–फेन्सी पसल,जुत्ता चप्पल पसल खोल्नका लागि यो रकम पर्याप्त हुन्छ । यी व्यवसायमा २५ लाख लगानी गर्ने हो भने किस्तामा ऋण तथा ब्याज,भाडा खर्च तिरेर मासिक १ लाख रुपैयाँ राम्रोसँग बचत गर्न सकिन्छ ।
माथि उल्लेखित काम केही प्रतिनिधिमूलक काम हुन् । यीबाहेक अन्य धेरै काम गर्न सकिन्छ । आफू स्वरोजगार बन्दै अरूलाई पनि रोजगारी दिन सकिन्छ । यसका साथै स्वदेशमा नै विभिन्न खालका वस्तु उत्पादन गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवा आफ्नै देशमा खपत गराउँदा नेपाली पैसा विदेसिन पाउँदैन ।
–२५ लाख रूपैयाँले नेपालमा कृषिजन्य व्यवसाय गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा हरेक परिवारमा केही न केही मात्रामा अवश्य पनि खेतीयोग्य जमिन छ । उक्त जमिनमा आधुनिक तरिकाले खेतीपाती,तरकारी लगायत नगदेबाली लगाउन सकिन्छ । उक्त कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मल,बीउ र आधुनिक खनजोत गर्नका लागि ट्याक्टर लगायतका उपकरण किन्नको सो रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मिहिनेतपूर्वक काम गरेर मासिक १ लाख रुपैयाँ बचत गर्दै जान सक्ने हो भने २५ महिनामा ऋण चुक्ता गरी २६ महिनादेखि व्यवसाय नाफामा सञ्चालन हुन थाल्छ ।
माथि उल्लेखित काम एक्लैले गर्न सकिने काम हुन् । यदि समूहगत रूपमा साथीहरू वा आफन्त नै मिलेर १० देखि १५ जनाको समूहले केही राम्रो योजना बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ ।
कतिपय युवाले निकै महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर पनि स्वदेशमै निक्कै ठूलो प्रगति गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । यसको मुख्य कारण इमानदारिता र लगनशीलता नै हो । यदि १५ जना मिल्ने हो भने २५ लाखको दरले ३ करोड २५ लाख हुन्छ । यति रकम लगानी गर्ने हो भने नेपालमा ३ सय जनासम्मलाई रोजगारी दिन सकिने मेरो आफ्नै अनुभव छ ।
उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति सफल उद्यमी बन्न र त्यही उद्यमी समाजको प्रतिनिधि बनी देशको विकास गर्न पक्कै असम्भव छैन । सरकारले पनि आफूले घोषणा गरिसकेको यो विषय तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
सरकारले घोषणा गरेको यो योजनाको शीघ्र कार्यान्वयन हुने र बेरोजगार रहेका युवाले रणनीतिक कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने देश समृद्धि भई अन्य युवाहरूका लागि पनि रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले व्यक्ति समाज हँुदै सिङ्गो देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन पक्कै पनि धेरै समय लाग्दैन ।
कोरोना संक्र’मण भएपछि के गर्ने ? जान्नुहाेस्